IVirgo Indoda kunye neAquarius Umfazi ukuhambelana kwexesha elide - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana IVirgo Indoda kunye neAquarius Umfazi ukuhambelana kwexesha elide
IVirgo Indoda kunye neAquarius Umfazi ukuhambelana kwexesha elide
Indoda yaseVirgo kunye nomfazi weAquarius banezinto ezininzi abanokuzifumanisa malunga nomnye nomnye. Xa bekunye, baya kufumanisa ukuba banxibelelana kakuhle kakhulu. Ngemfesane ethe kratya kunye nokuqonda okuthile, aba babini banokuba sisibini esinokuphumelela uvavanyo lwexesha.
Iikhrayitheriya IVirgo Man Aquarius Woman isiDanga sokuNgqinelana
Ubudlelwane phakathi kwendoda yaseVirgo kunye nebhinqa iAquarius lunamaxesha ayo. Inokonwaba, kwaye kwangaxeshanye inokucaphukisa omabini amaqabane.
Umfazi wase-Aquarius akaziwa njengowothando, kodwa ngendoda eyiVirgo unokulijonga ngokwenyani eli cala lakhe. Ayifuni kwaphela kwaye inyamezele kakhulu, iya kumenza abuyele kuye ngalo lonke ixesha.
Aba babini baya kuhlala bemangalisiwe kwaye behloniphana. Uya kuzama konke okusemandleni akhe ukumenza amthande ngonaphakade. Uya kuba ngumntu oqhelekileyo onobuhlobo kwaye amenze amfune.
Eli nenekazi linomdla, ke ulwalamano lwabo aluyi kufuna amagama amaninzi. Qho xa enoxinzelelo okanye ecaphukile ngento ethile, uzokwazi kwaye azame ukuyenza ngcono. Akasoze afune ukumyeka kunye nolwalamano lwabo.
Indoda yaseVirgo inokuba namaphupha amakhulu kunye namabhongo angenakuthelekiswa nanto, kodwa isaya kuba yeyona ndoda ilungileyo. Kwaye ulindele ukuba iqabane lakhe libe ngumfazi obalaseleyo, naye.
Unokukhululeka ngekhe adlale ngeenxa zonke xa kufikwa kuthando. I-Virgos zezinye zeempawu ezizinikeleyo nezinyanisekileyo kwi-zodiac. Umfazi wase-Aquarius uya kuhlala ekuvuyela ukwazi ukuba indoda yakhe ihlala ikhona kuye.
Xa kuziwa kubomi babo bobuchwephesha, bobabini banamabhongo kwaye bajolise. Kodwa oku akuthethi ukuba baya kuba ngamakhoboka omsebenzi. Baya kusebenza kakuhle njengabalingane kunye nabathandi ngexesha elifanayo.
Xa bekunye, baphantse bangabinakonakala. Njengabathandi, kufuneka bagcine yonke into ilula kwaye ikhululekile. Ngelixa benxibelelana ngcono kunabanye abantu abatshatileyo, xa kufikwa kwezona ngxaki zobomi zibaluleke kakhulu, banokuba nezimvo ezahlukileyo kakhulu.
Ukrelekrele kwaye uyasebenza, unendlela athambileyo ngayo kwaye unokuza nezimvo ezininzi. Ngokudibeneyo, banokuba ngabenzi bezinto ezinkulu.
Uphawu lweZodiac ngo-Epreli-14
Ama-Aquarians aziwa njengoyena mqondiso ungalindelekanga kwi-zodiac. Kunzima ukubenza bazinikele okanye bahlale bethe cwaka. I-Virgos zicocekile, zilungelelanisiwe kwaye zifuna ukugqibelela kwihlabathi leenkwenkwezi. Kulula ukuqikelela ukuba iVirgo izakwenza ntoni ngokulandelayo, kuba abantu abakulo mqondiso bayaziwa ngokunamathela kwiinkqubo.
Ukwabelana ngesondo phakathi kwendoda eyiVirgo kunye nomfazi wase-Aquarius kunokuchazwa njengokuzonwabisa. Uya kuza nemibono emitsha kunye nazo zonke iintlobo zokuphuculwa ezokuthanda indoda yeVirgo.
Ngelixa indoda yaseVirgo igxile ngoku, umfazi wase-Aquarius uya kuba kude ecinga ngekamva. Baya kufumana oku kunomdla omnye komnye, kodwa baya kugcina umgama.
Indoda yaseVirgo iyazi xa iphosakele kunye nendlela yokuxolisa, umfazi wase-Aquarius akanalo nofifi xa esithi uyaxolisa.
Zombini zizifundiswa, nangona zinomdla ohlukileyo. Konke malunga nobudala obutsha kunye nemibono emitsha engenakuvavanywa, ufuna ukuqiniseka ngale nto ayithethayo.
Akasoze aqonde ukuba angazazi njani izinto ezininzi kangaka nge-intuition. Uya kucinga ukuba le talente yakhe yinkolelo kuphela.
Kuba baneendlela ezahlukeneyo zokujongana neengxaki zobomi, aba babini bazokulwa ukuba babe sisibini. Akayi kusiqonda isizathu sokuba kufuneka abe nobuhlobo kwaye avule nakubani na, ngekhe ayibone imeko yakhe yokugxeka iyakha kwaye, nangayiphi na indlela, iluncedo.
Ingathi bayaphikisana kwinto yonke abayenzayo.
Kunqabile ukubona i-Aquarius ithatha ingcebiso komnye umntu, ke indoda yaseVirgo iya konwaba kakhulu xa izakubona ukuba ilandela iingcebiso zayo.
Banokwahluka okuninzi kwindlela abaziphatha ngayo, kunzima ukuthi bazakuhlala ixesha elide njengesiqabane.
Uhluthwe kukucoceka kunye neenkcukacha, akakhathali konke konke malunga noku. Inyaniso yokuba unemvukelo kwaye akaqhelekanga unokumenza azive enexhala.
Umtshato phakathi kwendoda yaseVirgo kunye nomfazi we-Aquarius unawo onke amathuba okusebenza. Aba babini banokuzonwabisa kunye, kungasathethwa ke ukuba banxibelelana ngokugqwesileyo. Xa kuziwa kwiinqobo kunye nemigaqo, ziyafana kakhulu.
Njengesibini esitshatileyo, baya kuyahlulahlula kwihlabathi kwaye bajonge kubo kuphela. Umfazi wase-Aquarius kunye nendoda yaseVirgo banokuba ngabahlobo abasenyongweni. Bobabini banomdla wokwenza umhlaba ube yindawo engcono, ke baya kuba negalelo elibalulekileyo eluntwini.
Ayinamsebenzi into eza kwenzeka ebomini babo, baya kuhlala benekhaya elihle apho baya kukhulisa khona abantwana abalungileyo. Lo mtshato uya kuba nempumelelo.
Ingathatha indoda yaseVirgo ixesha elithile ukuze ifunde indlela yokuthembela kumfazi we-Aquarius. Kungenxa yoko kusenokwenzeka ukuba kube kudala ngaphambi kokuba atshate naye. Kodwa kamsinya nje akuba ethe ewe phambi kwesibingelelo, uya kuba yeyona ndoda ilungileyo emhlabeni.
Le ndoda inokwenza ukuba inenekazi layo le-Aquarius liziva likhethekileyo. Ngaphezu koko, uya kuthembeka kwaye uzinikele. Uya kukuvuyela ngakumbi ukonwabela ukhuseleko anokuthi alunike. Kolu lwalamano, uya kuzisa uzinzo kwaye yena uya kuzisa ubushushu.
Ungayichazanga eyokuba unokwenza izinto zibenomdla ngakumbi kwaye zinomdla ngokuza nemibono emnandi yokwenza into elandelayo.
Ngokudibeneyo, baya kuphonononga lonke uhlobo lwehlabathi elitsha. Umahluko phakathi kwabo awuyi kuqatshelwa, ngenxa yolonwabo abazakuba nalo kunye.
Kuba bobabini banengqondo, bobabini bahlala benezinto ezinomdla zokuxoxa. Xa omnye wabo enephupha elihle, omnye uya kubaxhasa kwaye abancede bakufezekise. Ixesha elininzi abalichitha kunye, baya kusondela ngakumbi.
Iingcebiso zokugqibela zeVirgo Man kunye ne-Aquarius Woman
Indoda yaseVirgo luphawu loMhlaba oluguqukayo, ngelixa umfazi waseAquarius inguMoya oMiselweyo. Oku kuthetha ukuba kukho umahluko omkhulu phakathi kwabo.
Bayokonwaba njengesibini ukuba benza uhlengahlengiso oluthile ukuze babekho kumgama ofanayo wamaza. Umfazi wase-Aquarius akasoze ayamkele indalo egxekayo yendoda eyiVirgo.
Kwaye uya kugxeka kuphela ngaphezulu, angakhathali malunga nokuba akavumelani. Akasoze azithathe nzulu izimvo zakhe. Kucetyiswa ukuba ayeke ukuba 'yazi konke'.
Xa bephumile nabahlobo bakhe, usenokuziva engonwabanga. Ke, kungangcono ukuba bayaluphepha olu hlobo lweendibano.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, aba babini banokuba ngamaqabane asebenzayo. Unobudlelwano, ukuze ambonise indlela yokuvula ngakumbi. Ii-Aquarius zikwabizwa ngokuba ziingcinga ezilungileyo.
Oku kuthetha ukuba umfazi we-Aquarius unokuza nezicwangciso ezilungileyo. Njengomnye wamadoda asebenzayo kwi-zodiac, i-Virgo inokuguqula zonke izicwangciso zayo zibe yinyani.
Kungangabi lula ukuba nobudlelwane xa amaqabane eneembono ezingafaniyo, kodwa aba babini banesimo esifanelekileyo sokwenza uburharha ukuze busebenze. Inyaniso yokuba baya kuma omnye komnye iya kunceda kakhulu.
Nangona kunjalo, umzuzu athatha isigqibo sokuzisa ucwangco kubudlelwane iya kuba ngumzuzu xa yonke into iphakathi kwabo inokutshatyalaliswa. Kuya kufuneka aqonde ukuba izinto azinakuba zigqibelele kwaye zilungelelaniswe ngendlela afuna ukuba ngayo.
Ukuba uthatha yonke into inyathelo ngenyathelo, uya kuyithanda ngakumbi. Ngale ndlela kuphela, uya kuba ngumfazi ekudala elindile.
Indoda yeVirgo ayidlali nayiphi na imidlalo xa kufikwa kuthando. Uya kumazisa umfazi wase-Aquarius ukuba unomdla kuye. Uya kwamkela ukuthandana ngaphambi komtshato kwaye azame ukuseta kwinqanaba apho akhululeke khona. Uya kufumanisa eyona minqweno nemfihlo.
Lilonke, umfazi we-Aquarius kunye neVirgo banokwenza ubudlelwane babo busebenze nokuba bahlukile ngeendlela ezininzi. Unokumnceda ukuba aphumle kwaye abe nobuhlobo ngakumbi, angamfundisa indlela yokuziphatha ngakumbi.
IVirgo kunye neAquarius ukuhambelana kuthando, ubudlelwane kunye nesondo
Ukuhambelana kobuhlobo beVirgo kunye neScorpio
Oktobha 17 Imihla yokuzalwa
ipisces umfazi kunye nendoda ye-aquarius
Ukuhambelana komhlaza kunye nobuhlobo bescorpio
Ngo-1971 unyaka wehagu
I-sagittarius ibhinqa elinepisces man
Indoda ye-aquarius taurus umfazi uthanda ukuhambelana
umfazi ongumfazi kunye nendoda ye-aquarius